Templates waa mid ka mid ah sababaha ay tahay inaad ugu isticmaasho Wordpress boggaaga | Abuurista khadka tooska ah
Mawduucyada, mid ka mid ah sababaha ay tahay inaad u isticmaasho WordPress boggaaga ama bartaada internetka
Manuel Ramirez | | Dulucda, WordPress
WordPress waa madal u taagan dhowr sababood awgood culeys. Marka laga reebo inay tahay tan ugu ballaaran ee la isticmaalo xilligan, awooddeeda qaabeynta iyada oo aan loo baahnayn khabiir ku ah naqshadeynta websaydhka ama CSS, waxay ku taageertaa inay tahay ikhtiyaarka ugu fiican ee la isticmaalo marka aad rabto inaad bilowdo degel kuu gaar ah ama aad abuurto baloog leh waxyaabo gaar ah. Dabcan, haddii aad horeyba u rabtay inaad sameysato naqshad kuu gaar ah, waxaa fiicnaan laheyd inaad la xiriirto xirfadle, ka hor intaadan "ku quusin" gudaha iyo dibedda naqshadeynta qaab-dhismeedka.
Taasi waa sababta aan uga faalooneyno qaar ka mid ah wanaagga sababta WordPress waa madal ugu fiican in la furo degel leh hawl gaar ah ama baloog maaddo kasta oo aan rabno inaan ka hadalno. Mid ka mid ah xooggeeda ayaa ah inay leedahay wax ka badan 2.600 sheybaarro iyo in ka badan 31.000 oo fiilooyin ah kharash la'aan oo aad u adeegsan karto si aad ugu siiso dhagaystayaashaada waxyaabo tayo sare leh.
Inta badan isticmaalayaasha isticmaala WordPress iyagu ma ahan naqshadeeyayaasha websaydhka ama barnaamijyo. Xaqiiqadani waxay horey u muujineysaa awooda dhabta ah ee barxadani, iyo Strato ayaa nagu hagta sameynta degel la WordPress, sidaa darteed, marka lagu daro, hawshu waxay noqotaa mid aad u fudud. Taasi waa sababta ugu badan ee isticmaaleyaashu u bilaabeen WordPress iyaga oo aan aqoon u lahayn naqshadeynta websaydhka, sidaas darteedna waa goob ku habboon qof kasta oo doonaya inuu bilaabo mashruuc websaydh ah.
Waxaa jira kumaan kun oo arrimo ah oo aad u adeegsan karto qaabeynta degel internet ah. Kuwaas ayaa noo oggolaanaya Naqshadeynta aan dooneyno sii boggayaga ama baloog aan lahayn dhibaatooyin waaweyn. Waxaan had iyo jeer wax ka beddeli karnaa muuqaalka si ay ugu dhowdahay mowduuca sawir qaadista ama faylalka tacliimeed ee aan ku dooneyno ugu yaraan inay ahaato astaamaha ugu muhiimsan.
Waxaad ka heli kartaa arrimo aan tiro lahayn oo bilaash ah iyo kuwan waa laga beddeli karaa, si loo siiyo dareenka ah in boggayagu yahay mid gaar ah. Haddii aan dooneyno arrimo badan oo shakhsiyadeed, waxaan heli doonnaa ikhtiyaarro lacag bixin ah oo noo oggolaan doona inaan ka dhigno boggeena mid gaar ah haddii ay suurtagal tahay, maadaama ay leeyihiin ikhtiyaarro habayn ballaaran.
Uno boggaga ugu fiican si loo helo a Template WordPress waa Themeforest, meel ay ku soo ururiyaan xitaa qaababka cusub ee WordPress iyo inaad isku dayi karto inaad hesho fikrad ah sida websaydhkaagu u ekaan doono.
Waad beddeli kartaa midabada, soo dejin kartaa astaan, ama beddeli kartaa asalka, si aad u abuurto isdabajoogayaal iyo waxyaabo kale oo muuqaal gaar ah siin kara baloogga. Haddaan intaas ku darno kumanaan kun oo fiilooyin ah in aan ku leenahay WordPress, waxaan sii dheereyn karnaa howlgalka ama astaamaha barta laga hadlayo si aan ula qabsano baahiyaheena.
Isla plugins-yadaas way awoodaan ku dar madal u gaar ah waxa loo yaqaan 'WordPress', marka dulqaad yar iyo adkeysi, waxaad kuheli kartaa natiijooyin heer sare ah waqti gaaban haddii aad u hurto saacadahaaga maalmeed adigoon waxbadan ka quusan. Halkan waxaan wadaagnaa taxane ah fiilooyin tayo sare leh oo bilaash ah.
Faa'iidada kale ee WordPress waa inay tahay aad u soo jiidasho leh SEOSidaa darteed, adoo raacaya tillaabooyin yar, degelkeenu wuxuu ka muuqan karaa natiijooyinka ugu horreeya ee mashiinnada raadinta sida Google, taas oo faa'iido weyn u noqon doonta isticmaaleyaal badan si ay u akhriyaan waxyaabahayaga ama waxa aan bixinno.
Marka la soo koobo, haddii aad raadineyso a Customization gaar ah si deg deg ah websaydhkaaga, adoo adeegsanaya aalad WordPress ah oo wanaagsan iyo samir, waxaad abuuri kartaa balooggaaga ama degelkaaga dhibaato la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » WordPress » Mawduucyada, mid ka mid ah sababaha ay tahay inaad u isticmaasho WordPress boggaaga ama bartaada internetka
Farshaxanno sida Jessica Walsh ayaa buuxiya mala-awaalka
Rinjiyeynta sawir gacmeedka iyada oo loo marayo xaqiiqda dhabta ah